Aqoonkaab faaidooyinka caafimaad ee shaaha bigeyska ah | Aqoonkaab
faaidooyinka caafimaad ee shaaha bigeyska ah
Jul 15, 2016Caafimaadka
waxa laga yaabaa in aanay dad badani garanaynin faaidooyinka shaaha bigeyska ah laakin xaqiiqdii waxa laga helaa faaidooyin caafimaad oo tiro badan ,waxaana loo isticmaalay in lagu daweeyo xanuunada qaar muddo fog ka hor wadanka chinaha iyo wadamo kale ayaa laga isticmaalay.
1. wuxu ka hor tagaa cudurka kansarka: shaahu waxa uu ka kooban yahay maadooyin lidi ku ah koritaanka unugyada kansarka,si gaar ahna wuxu uga hortagaa kansarka mindhicirada ,kansarka caloosha iyo kansarka qanjidhka prostateka.
2. dejinta dhiigkarka : baadhitaano caafimaad ayaa sugay in shaahu uu caawiyo habsami u shaqaynta dhuumaha dhiiga ,sidoo kalena uu dejiyo dhiig karka . shaaha bigeyska ahi wuxu sidoo kale ilaaliyaa caafimaadka wadnaha,dhuumaha dhiiga isagoo ka ilaaliya xanuunada.
3.yareynt xadiga duxda ee jidhka :shaaha bigeyska ahi wuxu yareeya xadiga duxda saaidka ku ah jidhka taas oo dhibaato jidhka ku haysa ,shaahu wuxu sidoo kale ka hortaga in halbowlayaashu adkaadaan dhiiguna xinjireysto.
4.ilaalinta wadnaha :maadaama uu shaahu ka hortago dhiig karka iyo duxda badan wuxu sidaasoo kale ilaaliyaa caafimaadka wadnaha iyo habdhiska dhiig wareega ,waxaanay culima badan xaqiijiyeen in dadka caba laba koob iyo in ka badan oo shaaha bigeyska ah maalinkasta ay 50% ka badbaadayaan wadne xanuunka marka la barbar dhigo dadka aan cabin shaaha bigeyska ah
5. xoojinta lafaha: sida ay baadhitaano iyo daraasado cilmiyeed xaqiijiyeen in dadka shaaha bigeyska ah u caba si joogta ah ay leeyihiin lafo cuf ahaan iyo awood ahaanba xoogan sidaasoo kale shaahu wuxu dawo u yahay dadka ka cawda laabatooyinka (joints) iyo lafo burburka .
6:wuxu lidi ku yahay bakteeriyda iyo fayraska:shaaha bigeyska ahi waa ka laaya oo dila bakteeryada iyo fayraska ,maadaama uu shaahu siiyo jidhka difaac dabiiiciya .
7. caafimaadka ilkaha iyo ciridka :shaahu wuxu ku jira maadada Fluoride taas oo caawisa ilaalinta caafimaadka ciridka iyo ilkaha sidoo kale waxay dishaa bakteeriyada sababta wiswiska.
8.caafimaadka maqaarka :kulaylka daran ee qoraxda iyo fekerka badan waxay sababaan inay dhaawacaan unugyada maqaarka waxaanay soo dedejiyaan in qofka ka muuqdo calaamadaha gabowga ,hadaba shaaha bigeyska ah ayaa saameyn weyn ku leh daawada iyo soo kabashda unugyda maqaarka isla markaana ku ilaaliya muuqaal caafimaad qaba.
Previous PostAdobe premiere cc 2015 Next PostSidee ayaad noloshan ugu guuleysan kartaa talooyin muhiima
maxamed maxamud Sardheeye
Maxamed Maxamud Sardheeye waa Qoraa wax badan ka qorey arrimaha bulshada , caafimaadka , arrimaha islaamka iyo wararka Technologiyada waxa uu ku Takhasusey culuumka computerka gaar ahaan qaybaha web developerska iyo networking .